တခါတလေတော့လဲ: ဒီဇင်ဘာပိတ်ရက်မှာ ဘာလုပ်မလဲတဲ့
ခေါင်းစဉ်က ဒီဇင်ဘာပိတ်ရက်မှာ ဘာလုပ်မလဲတဲ့
ထိုခေါင်းစဉ်ကို အန်တီတင့်ထံတွင် စတွေ့ခြင်းဖြစ်လေသည်။ ခုတော့ ကန်ဒီလေးကရေးခိုင်းလို့ရေးဖြစ်သွားပါသည်။ အန်တီတင့်က. မနှင်းဆီရဲ့တဂ်ပို့စ်ဆိုလို မဆီမဆိုင်မနှင်းဆီကို လွမ်းဖြစ်သေးသည်။ ဒီဇင်ဘာရဲ့ မြူခိုးငွေ့တွေကြားထဲမှာ မနှင်းဆီနဲ့ကျွန်ုပ် ခဏခဏ ဝေးနေရသည်။ ထိုသို့သောနေ့ရက်များကို ကျွန်ုပ်မနှစ်မြို့လှပါ ထိုသို့သောနေ့ညများသည် ဒီဇင်ဘာရဲ့အအေးဒါဏ်ကြောင့် အလွမ်းတွေလည်းအေးစက်ကုန်ပါသည်။ သို့သော် ကမ္ဘာဉီးလူသားတို့ စားသောအသီးကို ကျွန်ုပ် စားရသောအခါ အရာရာလှပ ကျွန်ုပ်အပြုံးတွေတောင် ကြွကြွရွရွဖြစ်ကုန်ကြသည်။
တကယ်ဆို ကျွန်ုပ်သည် ဒီဇင်ဘာတွင် ဘာလုပ်မည် နှစ်ကူးတွင်ဘာလုပ်မည် ဟုအစီအစဉ်မရှိပါ ကြိုပြီးတော့လည်း တွေးမနေချင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်စမတ် ဆိုသည်ကို မြန်မာပြည်တွင်ရှိစဉ်ကပင် မသိခဲ့ပါ ဒီဇင်ဘာကိုသာသိသည်။ ထို့ကြောင့် ခရစ်စမတ်နှင့် ကျွန်ုပ်
သိပ်မဆိုင်ဟုထင်သည်။ ဒီဇင်ဘာနှင့်သာ ကျွန်ုပ် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့လေသည်။ အတိုချုံ့ပြောရလျှင် ဒီဇင်ဘာတွင်အေးသည် မြူခိုးတွေ ဝေလို့ ဆောင်းနှင်းများကျသည်။ တသော့သော့ လေပြေညှင်းများ တဖျော့ဖျော့ အေးလှသည်။ ရာသီဉတု သာယာသည်။ ထို့ကြောင့် မနက်စောစော ထမင်းပူပူနွေးနွေးနှင့် ပဲပြုတ်ဆီဆမ်းစားကာ မီးလှုံခဲ့ကြသည့် ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကို ပြန်လည်လွမ်းဆွတ်မိသည်။ ယခုအခါ အေးလာပြီဖြစ်သောကြောင့် အမေ့ကျမ်းမာရေးကို စိုးရိမ်မိသည် အမေ့ခြေဆစ်လက်ဆစ်များ ယောင်နေပြီလားဟုတွေးမိသည် ဆေးခန်းရောသွားရဲ့လားဟု ပူပန်မိသည်။ ဒီဇင်ဘာရဲ့ ဆောင်းနှင်းစက်တွေကို အမေ နွေးထွေးစွာ ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါစေ။
ဒီဇင်ဘာမှ အေးချမ်းလှပသည်ဟု မယူဆမိပါ။ ခံစားတတ်လျှင် နေ့ရက်တိုင်းက အေးချမ်းလှပနေမည်သာ။
ကျွန်ုပ်သည် သူများယောင်လို့ လျှောက်ယောင်သော လူတစ်ယောက်လားဟု ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးခွန်းထုတ်မိသည်။ ခရစ်စမတ်ဆိုတာ ကြားဖူးသည်မှာ ဤမလေးရှားသို့ ရောက်မှပင်ဖြစ်ပါသည်။ အသိပညာဗဟုသုတလည်း နည်းပါးသလို အတတ်ပညာလည်းမရှိသော ခပ်နုံနုံလူတစ်ယောက်ဟု ထင်လျှင်လည်း ထင်နိုင်စရာဖြစ်ပါသည်။ SANTA ကိုလည်းမသိပါ သူဘာကြောင့်လက်ဆောင်ပေးသလဲ ဆိုတာလဲစိတ်မဝင်စားပါ။ သို့သော် SHOPPING MALL. ကြီးတွေကအစ SUPER MARKET. သေးသေးလေးတွေအဆုံး ခရစ်စမတ်ဟု တဝုန်းဝုန်းအော်နေချိန် ဖြူဖြူမည်းမည်းအားလုံးကလည်း ခရစ်စမတ်နေကြသည်။ ဘာကြောင့် ခရစ်စမတ်တယ်ဆိုတာ စိတ်မဝင်စားပေမယ့် ခရစ်စမတ်ပါလားဆိုတဲ့ အသိလေးဝင်ဖြစ်တယ်။ ခရစ်စမတ်သစ်ပင်များကို အမျိုးမျိုးအလှဆင်ကြသည် လက်ဆောင်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုလည်း ဈေးလျှော့၍ရောင်းနေကြသည်။ ကျွန်ုပ်အမြင်တွင် လှပအောင်ပြင်ထားလို့သာ ထိုအပင်များအားငေးကြည့်ဖြစ်သည်။ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများလည်း ဈေးလျော့ရောင်းသောကြောင့် အလုအရက် ဝယ်ယူနေကြခြင်းသာ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ခရစ်စမတ်နှင့် ကျွန်ုပ် သိပ်မဆိုင်သော်လည်း ခင်မင်သူတချို့ထံမှ လက်ဆောင်ကဒ်ကလေးများရဖူးသည်။ သကြားလုံးများဝေလို့ စားဖူးသည်။ ကျေးဇူးတင်မိသည်။
ခရစ်စမတ်တွင် နှင်းများနှင့်သာ ပနံသင့်လှသည်ဟု မဆီမဆိုင်ထင်မိသေးသည်။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွင် ကြည့်ဖူးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော် နှင်း ပါပါမပါပါ ခရစ်ကတော့ စမတ်နေကြသည်။
New year ဆိုရင်တော့ ဘာလိုလိုနဲ့ တစ်နှစ် ကုန်လွန်သွားပြန်ပြီလို့ တွေးဖြစ်တယ်။ ငါဘာတွေလုပ်ခဲ့ပြီးပြီလဲလို့ တွေးမိတယ်။ ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါ။ ရှေ့ဆက်ဘာလုပ်ရမလဲဟု တွေးဖြစ်ပြန်သည်။ မသေချာမရေရာခြင်း များစွာနဲ့ နေသားကျခဲ့တော့ ဘာမှဆက်မတွေးချင်တော့ခြင်းသာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဖြတ်သန်းရသော နေ့ တစ်နေ့ချင်းစီအတွက်သာ စိတ်ချမ်းသာအောင်နေဖြစ်သည်။ နှစ်ကူးညမှာတော့ ဖြစ်နိုင်ရင် မနှင်းဆီနဲ့အတူ မီးပန်းတွေဖေါက်ပြီး စကားတွေပြောရင်း လှပတဲ့ရောင်စုံညကို ကျော်ဖြတ်ပြီး နှစ်သစ်ကို ကံကောင်းခြင်းများစွာနဲ့ ကူးခြင်မိတယ်။ အားလုံးသော ခင်မင်ရပါသော စာရှုသူများနှင့် ဘလော့ဂါ များလည်း နှစ်သစ်ကိုပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာဖြတ်ကျော်ပြီး ကံကောင်းခြင်းတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။
^_^ *****HAPPY NEW YEAR AND MARRY CHIRSTMAS *****^_^
Posted by ဖြိုးမောင်မောင်(CTM) at 5:11 PM
Labels: တပ့် ပို့ စ်
ဖတ်သွားပါတယ် ခင်ဂျာ ..ခရစ်စမတ်မသိသော ကိုကြီးဖြိဲုး ပျော်ပါစေ
ဟ ဟ တကယ်ကြီး ခရစ္စမတ်ကိုမသိဘူး....။ ခရစ္စမတ်ကိုလဲမသိ ပုန်းရည်ကြီးလဲမစားဖူး ထောပတ်သီးဖျော်ရည်လဲမသောက်ဖူးတဲ့ ဖြိုးတစ်ယောက် နှစ်သစ်အကူးညမှာ မနှင်းဆီနဲ့မတူ မီးပန်းဖောက်နိုင်ပါစေဗျာ...။
ပျော်ရွင်ဖွယ် ခရစ်စမတ်လေး ဖြစ်ပါစေ :):)
ဟိဟိ.. တူတွားပြန်ပြီ.. အန်တီတင့်ပိုစ့်ကို ကန်ဒီလည်း ဖတ်ပြီး မဆီမဆိုင် မနှင်းဆီကို သွားသတိရတယ် ဟဟဟ :P xD
ရေးပေးတာ ကျေးဇူးအစ်ကိုရေ... တက်ဂ်သာတက်ဂ်တာ ရေးပေးမယ် မထင်ဘူး.. ပြန်ဖို့နဲ့ အလုပ်လည်း ရှုပ်နေတယ်ထင်လို့လေ :D :D
Merry Christmas and Happy New Yearပါရှင်